FENNEL FENNEL: MA TAHAY BAS AMA MA, WAA MAXAY SIFOOYINKA WANAAGSAN IYO ISTICMAALKA, SIDA LOO CUNO IYO QAABKEE, IYO MAXAY YIHIIN HABABKA KAYDINTA? - BEER CAGAARAN
Xiddig maskax furan oo faa'iido leh. Isticmaalka ujeedooyinka caafimaadka iyo karinta, hababka kaydinta
Dad badan ayaa maqli jiray fennel. Mid ka mid ah qaybaha ugu faa'iido leh ee warshadani waa xididka, kaas oo ku jira nafaqooyin iyo walxo raad raac.
Xiddiga geedka waxaa si weyn loogu isticmaalaa daawada. Waxaa loo isticmaalaa daaweynta iyo ka hortagga cuduro badan. Intaa waxaa dheer, xididka fennel waxaa loo isticmaalaa si loo diyaariyo noocyo kala duwan oo suxuun.
Xiddiga Fennel wuxuu ku dhacaa faa'iido badan. Waa maxay xididka fennel ee caanka ku ah? Aynu isbarbar dhigno.
Ma tahay basasha ama ma aha?
Xaqiiqdii, waa basal, oo ay ku caan baxeen habdhaqan adag, adag oo adag. Fennel xidid fusiform, qaab dhismeedka - lilyahay. Waxay leedahay dhadhan macaan iyo caraf udgoon, midab cad oo huruud ah.
Rootiga fennel-ka waxay u eg yihiin dill, laakiin dibadda ayay ka weyn yihiin. Fennel waa mid ka mid ah wakiilada dalladda qoyska. Dhirta dhulalka - Mediterranean, laakiin waxay la kulmeen waqtiyadii hore iyo gobollada Aasiya.
Faa'iido iyo bogsiin guryaha
Xiddiga fennelka waa mid aad u faa'iido leh!
Ka hor intaadan ka hadlin faa'iidooyinka qeybtan geedka, tixgeli halbeegga iyo go'aaminta waxa vitamiinyada iyo raadadka qaybta qaybtan ee dhirta ay hodan ku yihiin.
Eeg kasta iyo faytamiin kasta waxaa la qaadaa qiyaasta 100 garaam oo fennel ah.
Vitamin A - 8 micrograms.
Vitamin B1 - 0.01 mg.
Vitamin B5 - 0,232 mg.
Vitamin PP - 0.64 mg.
Iron - 0.74 mg.
Manganese - 0.191 mg.
Selenium - 0.7 mcg.
Sodium - 51 mg.
Potassium - 415 mg.
Fosfooraska - 50 mg.
Waqtiyadii hore, dhakhaatiirtu waxay qadariyeen dhirtaas. Oo halkan waa sababta:
Xiddiga Fennel wuxuu saameyn wanaagsan ku yeeshaa nidaamyada kala duwan ee jirka bini'aadamka - cabsida, neefsashada, dheefshiidka, iwm.
Nidaamka dheef-shiidka, waa faa'iido leh sababta oo ah waxay la dagaallamaysaa sinnaanta, xanuunka caloosha iyo mindhicirrada, waxay dhiirigelisaa cunto xumida waxayna caawisaa dysbacteriosis.
Nidaamka neefsashada ee caawimaadda waxay hagaajinaysaa xaalada, sababtoo ah Warshadu waxay awood u leedahay in ay yareeyso dhuumashada, waxay ka caawisaa boronkiitada iyo qabow.
Nidaamka wadnaha, isticmaalka ayaa sidoo kale faa'iido leh maxaa yeelay waxay hagaajineysaa wareegga dhiigga.
Cudurka Fennel wuxuu saameeyaa habka urojinimada, dagaalyahannada urolithiasis.
Cunista ayaa saameyn ku leh nidaamka dareenka, yareeynta murugada, hagaajinta muuqaalka, aragtida taabashada iyo hagaajinta hurdada dadka waawayn iyo carruurta.
Waxtarka aasaasiga ah ayaa cadeeyaa saynisyahannada iyo dhakhaatiirta marka ay dhacaan maqaarka maqaarka (canug, finan, finan), indho (edema) iyo beerka (sumeynaya by boqoshaada iyo aalkolada).
Isticmaal xididka fennel ee xaaladaha soo socda:
Joogitaanka burooyinka boogaha leh iyo kuwa nabarada leh. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in xubnaha raadiyaha iyo antioxidants ee ka mid ah, ay awoodaan inay joojiyaan koritaanka burooyinka iyo qaybinta habboon ee unugyada.
Dhibaatooyinka dheefshiidka. Qaadashada xanuunka mareenka caloosha, waa in la cunaa, warshaduna waa kicinta habka dheef-shiid kiimikaadka, waxay hagaajin kartaa saxarada, yareeyn kartaa meteorism iyo hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka.
Dhibaatooyinka nidaamka dareenka. Xiddiga Fennelku waa antidepressant kaas oo yareeyn kara murugada iyo walbahaarka.
Kahortagga SARS iyo cudurrada kale ee faafa. Qaadashada qadar badan oo fitamiin C ah ka kooban, xididka fennel waxay hagaajin karaan difaac. Waxa kale oo uu la dagaallamaa fayrasyada iyo bakteeriya, wuxuu leeyahay saameyn saameynaya.
Aragga cakiran. Cunista xididka fennel waa furaha si guul leh looga hortago waayeelka hore ee indhaha. Casiirka waxaa loo isticmaalaa sida ilayska si loo yareeyo daal iyo casaan.
Yaraanta birta iyo hemoglobin yar. Marka asalka ah ee fennel ka kooban ma aha oo kaliya bir ah, laakiin sidoo kale histidine - shay la dagaallama anemia.
Asalka hormoonada ee khatarta ah. Xiddiga feneelka waxaa loo isticmaalaa haweenka inta lagu jiro cilladda dhiigga caadada iyo caadada xanuunka.
Nadiifinta jirka walxaha waxyeelada leh, sunta iyo jajabka. Cudurka Fennel wuxuu saameyn ku leeyahay duriinka, kaas oo aad ka nadiifin karto jidhkaaga oo aan waxyeello lahayn.
Qiyaasta maalin walba ee fennel - 2-3 xididdada.
Waxyeelleyn kara, waxa ka hortaagan ama xayiraaddu?
Xiddiga Fennel wuxuu ku dhawyahay wax ka horjeeda. Laakiin waxaa jira kooxo dad ah oo isticmaalkooda fennel si adag loo mamnuuco:
Haweenka uurka leh iyo naasnuujinta. Waa inay diidaan inay qaataan dhirtaas, sababtuna waxay tahay jiritaanka walax aan ku haboonayn hormoonka haweenka ee hoormoonka. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax isku mid ah oo ku saabsan saynisyahannada. Hal dhinac, cabitaanku wuxuu kordhiyaa ciriiriga caanaha waxaana uu ka caawinayaa in laga guuleysto colka xanuunka leh. Dhinaca kale, maaddooyinka kala duwan ee walxaha kala duwan ee ka kooban halista waxay sababi karaan xasaasiyad carruurta yaryar.
Dadka qaba suuxdinta. Sababta ayaa ah in xaqiiqda ah in xididka fennel uu ka kooban yahay dopamine - walax aan dhib lahayn dadka caafimaadka qaba, laakiin waxay sababi kartaa suuxdinta suuxdinta.
Dadka leh xaasidnimo. Si aad u go'aamisid in qofku yahay mid aan loo dulqaadan karin, haddii aad dareentid tabar-dari, dawakhaad iyo matagid, macnaheedu waa inaad u baahan tahay inaad ka takhalusto dhirta cuntada.
Waxa kale oo jira dad ay isticmaalaan rootiga fennel aan la mamnuucin, laakiin waa in laga fogaadaa tiro badan.
Dadka qaba wadna xanuunka wadnaha. In kasta oo xaqiiqda ah in fennel hagaajiyo nidaamka wadnaha, waxay sidoo kale keeni kartaa waxyeello. Sidaa darteed, waa in loo isticmaalaa taxaddar aad u ba'an.
Dadka qaba shuban. Cunista rootida fennel waxay leedahay saameyn jilicsan.
Dadka qaba xanuunada dhiigbaxa (tusaale ahaan, dhiig karka).
Waxaa jira dhowr isticmaalo ujeedooyin caafimaad.
Saliid muhiim ah.
Ka hor inta aanad isticmaalin macnaheedu waxaay ka wanaagsan tahay inaad la tasho dhakhtar! Ha isku daweynin!
Cuntada lagu kariyo daaweynta dadka
Si loo kordhiyo nuujinta. Si aad u diyaariso maraq, waxaan u baahan nahay: 5 garaam oo rooti fennel ku shub 250 ml oo biyo ah karkariyo, isku kari ilaa 5 daqiiqo oo ha u istaagaan ilaa nus saac. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo 2-3 jeer maalintii.
Iyadoo boronkiito. Si aad u diyaariso decoction ku saleysan xididka fennel, waxaan u baahan doonaa: a shaaha oo ka mid ah caleemo chamomile farmashiyaha, 5 garaam oo xidid fennel, dhammaan 300 ml oo biyo ah karkaraya ku shubtay.
Ka dib marka isku dar ah la isku shaandheeyo, adkee oo baabbi'iso 150 ml mar.
Marka gumaacada. Markaad diyaarinaysid faleebada si aad uga hortagto gastritis-ka, waxaad u baahan tahay inaad qaadato: 5 garaam oo rooti fennel ah, shaaha oo ah shamomile, 5 garaam oo xidid xidid iyo qadar yar oo cawska. Waxyaabaha oo dhan ku shub 300 ml biyo karkaraya, ku adkeyso laba saacadood. Cab maalin walba ka hor wakhtiga jiifka.
In cudurada habka biliary ah. Wixii diyaarinta waxaad u baahan doontaa inaad ku shub 1 qaado yar oo qoyan fennel fennel leh 250 ml oo biyo ah karkaraya, si aad u adkeyso. Cab biyo 2-3 qaado ilaa 85 ml maalintii, iyada oo ku xidhan darnaanta cudurka.
Slimming. Diyaarinta faleebo waxay u baahan doontaa: 1 qaado oo ka mid ah dhirta fennel fennel, 1 qaado oo ah caleemaha dhadhan iyo 1 qaado oo ah chamomile farmasiga. Shub isku dar ah 250 ml oo biyo ah karkaraya. Si aad u isticmaasho hal mar maalintii, ugu badnaan 7 maalmood.
Wixii nidaamka dareenka. Wixii habdhiska dareemayaasha, waxaa lagama maarmaan ah in lagu diyaariyo shaaha fennel, qaado rooti fennel, gooyaa dhowr xaleef, ku dar shaah cagaaran, ku shub biyo karkaraya. Sii adkee. Ka dib cabitaankaan waa la wada baabbi'in karaa.
Sida febrifuge. Qaado dhowr jeexley of xidid fennel, daboolo biyo karkaraya (qiyaastii 300 ml). Qabow hoos u dhig. Dabaysha ayaa diyaar u ah isticmaalka
Sidee loo adeegsadaa karinta?
Xiddiga geedkaani waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa nafaqadasida loo cuno? Waxay u adeegi kartaa saxan dhinaca madaxa ah, oo ah mid lagu daro kalluunka iyo hilibka. Boorash la dubay waa saxar cunto oo aad u fiican. Cunto khudradda cufan leh oo ay ku daraan xididka fennel.
Waxa kale oo lagu daraa alaabta la dubay, la kariyey iyo qasacadaysan.
Aad dhadhamiso saxan leh dheeraadka ah ee fennel heli doonaa dhadhan nal iyo qurux badan ee dabka. Tixgeli ereyga markaad ku darto xidid cunto.
Halkee laga helayaa basasha?
Waxaad ka iibsan kartaa suuqa khudradda ama aad naftaada u kori karto.
Sida loo koro oo loo ururiyo?
Maydhayaasha shimbiraha ayaa isla markiiba lagu beeray hawo cusub oo ah meel fog oo ah 25-30 cm midba midka kale, ama gudaha gudaha dheriga.
Geedku wuxuu jecel yahay raajada qorraxda, wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah wuxuuna jecel yahay ciidda qoyan iyo dhoobada.
Kadib sameynta nalka dabiiciga ah ee dhulka, waa lagama maarmaan in lagu daboolo ciidda dabacsan.
Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro warshadda marka asliga ah ee saldhigiisu gaaro illaa 10 mm. Si loo ururiyo lafdhabarta, waa inaad qodo basasha, gooyaa asliga ah.
Halkee laga gadan karaa?
Waxaad ka iibsan kartaa asalka suuqyada qudaarta, dalbo dukaanka internetka (tusaale ahaan, "Ecofarm", "Alphabet of Taste", "Green Shop").
Marka aad iibsanayso, fiiro gaar ah u leh nalka guluubka, waa inuusan jirin qoob-ka-shaqeyn. Waxaa lagu talinayaa in la iibsado adag, cufan cad oo cagaaran-cagaaran. Si taxadar leh u fiiri urta, waa in uusan urin kolley iyo kallana.
Qiimaha miisaaniyada ee Moscow waa 1 xabbo waa qiyaastii 90-97 rubi. Qiimaha St. Petersburg ee 1 xabbo waa 110-120 RUB.
Ku keydin fennel ee qaboojiyaha ee ciid qoyan ama sanduuq qabow. Xiddiga Fennel waa la jarjarayaa oo la dhigaa qaboojiyaha, ama la qalajiyey.
Fahmidda faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka xididka fennel, midkastoo aan isku raaci karin in tani ay tahay warshad xiiso leh oo wax tar leh oo hagaajin karta xaaladda jidhka, iyo sidoo kale in la kala saaro cuntada caadiga ah. Cunista cuntooyinka dadwaynaha iyo suxuunta laga bilaabo xididka geedka ma noqon doonto mid sahlan.